Kalo qaybinta xiliyada shaqada oo ku kordhay xaruumaha waayeelka lagu daryeelo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kalo qaybinta xiliyada shaqada oo ku kordhay xaruumaha waayeelka lagu daryeelo
Kalo qaybinta xiliga shaqada
La daabacay tisdag 12 mars 2013 kl 11.41
Waxaan caadi sii noqonaya kalo qaybinta xiliga shaqada, taas oo uu ruuxa shaqeynayo galinka hore kabacdiina galinka danbe isla maalinka shaqada, sida uu qorey wargeyska Kommunalarbetaren.
Arintaan oo ku ah shaqaalaha stress iyo caafimaad daro, sida ay tiri Annelie Nordström oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee kommunal, waxeyna intaas ku dartey in arintaan liidasho u keeneyso daryeelka bukaanka.
- Marka uu ruuxa shaqaalaha ah uu waqti u hayo in uu waayeelka soo wareejiyo ama la sheekeysto, ayaa lagu qasbaa xubinayaasheena in qolka shaqaalaha fariistaan oo ay qaataan nusaac mushaar la'aan ah, ayey tiri Annelie Nordström.
U kuurgal uu sameeyey ururka shaqaalaha kommunal ayaa tobankii sagaal degmooyinka ku jawaabeen in ay isticmaalanaan qaybinta xiliga shaqada taas oo ah mid aad ugu wanaagsan shaqobixiyaasha marka laga fiiriyo dhanka dhaqaalaha. Kalobar waxay qireen in ay badatey kalo qaybinta xiliga shaqada. Meelaha shaqo ee ay badatey kalo qaybinta xiliga shaqada ayaa ah xaruumaha lagu daryeelo waayeelka, xarumahaas oo shaqaalaha jadwelkooda shaqo ay kamid tahay xiliyo kalo gedisan oo ay shaqeeyaan isla maalinkii.
Shantii afar ayaa gunoyiinka ku helin saacado badan oo shaqada hakad kaga jiraan isla maalinka ay shaqeynayaan.
Laakiin Ingela Gardner oo ka tirsan xisbiga Moderatka kana mid ah gudiga wadoxaajoodka ee matalaye ururka degmooyinka iyo goblada SKL ayaan aaminsaneyn in ay suurtogal tahay in nidaamkan wax laga badalo
-tusaalehemtjänsten baahida ugu badan ee shaqo waxa weeye xiliyada subaxii iyo habeynkii, waxii intaas ka dabeeyana baahidooda wey yaraataa, ayey tiri.